राजाले भने- जनताले कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने हो ? - Suvham News
राजाले भने- जनताले कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने हो ?
February 18, 2018 by gsmktm
६ फागुन, काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । निर्वाचन गर्नु मात्र प्रजातन्त्र नभएको भन्दै उनले २०६३ बैशाख ११ पछि भएको राजनीतिक परिवर्तनको समीक्षा गर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
Tagged राज परिवार, राजनिती
Prevमहाशिवरात्री तथा नेपाली सेना दिवस २०७४
Nextपार्टी एकता गर्न एमाले र माओवादी सहमत, बालुवाटारमा भयो सातबुँदे सहमति